.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Blog ကို Template အသစ်ပြောင်းလိုက်ပြီ..
Blog ကို Template အသစ်ပြောင်းလိုက်ပြီ..
ကျွန်တော် ဒီ Blog ကို Template အသစ်ပြောင်းဖို့ စဉ်းစားနေတာတော့ မနည်း ကြာပါပြီ။ ဒီနေ့ အချိန်ရနေတာနဲ့
လျှောက်ကလိရင်း ပြောင်းဖြစ်သွားတယ်။ ရိုးရှင်းပြီး လှပတဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုးလေးဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံး လုပ်ထားပါတယ်။
Blog ကို ဖွင့်ရင် Loading မြန်အောင်၊ သိပ်မလိုအပ်တာတွေကို ဖြုတ်ပစ်ထားပါတယ်။ ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေအောင်၊
နောက်ခံ [ Background ] ၊ စာသားတွေ၊ လင့်တွေ နဲ့ ပုံတွေကို အစုံ လိုက်ကြည့်ပြီး သေချာလုပ်ထားပါတယ်.....။
ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်လုပ်ထားတာကို ပြန်ကြည့်ပြီး တော်တော်ကြိုက်နေပြီေိေိ။ လုပ်တတ်သလောက်တော့
အကောင်းဆုံး ကြိုးစားပြီး လုပ်ထားတာပါ။ အဆင်မပြေတာလေးတွေ ရှိရင်ဝေဖန် အကြံဥာဏ်လေး ပေးသွားပါဦးနော်။
ဒီ Flash File လေးကိုလည်း အနော်ညတုန်းက လျှောက်ကလိထားတာပါ။ နားထောင်ကြည့်ဦးနော်..
ပို့စ် အသစ်လေးတွေလည်း ထပ်တင်ပေးဖို့ ရှိပါတယ်နော်.. အချိန်ရတာနဲ့ ဆက်ပြီး ရေးတင်ပေးသွားမှာပါ။
ကျွန်တော့်ဆိုဒ်လေးကို လာလည်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့..
Posted by Thurainlin at 23:03